Tijaabada unugyada ee ilmo galeenka - 1177 Vårdguiden
Tijaabada unugyada waxa laga soo qaadayaa qaybta hoose ee ilmogaleenka.
Waa maxay tijaabada unugyadu?
Tijaabada unugyadu waxay muujin kartaa haddii ay wax iska bedeleen qeybta hoose ee ilmogaleenka. Waxay ku taalaa xagga hoose ee gudaha siilka. Caadi ahaan wax khatar ah ma aha haddii wax isbeddeleen. Iyadaa sida caadiga ah kaligeed iska bogsata. Laakiin waxay sidoo kale noqon kartaa calaamad cudurka kansarka, durba intaanu isku bedelin. Markaas ayaad u baahan tahay inaad hesho daawo. Tijaabada unugyada waxa laga soo qaadayaa qaybta hoose ee ilmogaleenka.
Maxaa aniga la iigu yeeray in la iga qaado tijaabada unugyada?
Dhammaan dumarka Iswiidhan jooga ee da'doodu ka weyn tahay 23 sanno jir ayaa loogu yeedhayaa tijaabada unugyada, qiyaas ahaan saddexdii sanoba hal mar. Waxaad heli doontaa martiqaad gaar ah oo baadhitaan ah. Waxa ku qoran wakhtiga iyo goobta baadhitaanka. Waad qabsan kartaa wakhti cusub, haddii waqtiga aad heshay aanu kugu habooneyn. Waxaad sidoo kale adigu la xiriiri kartaa daryeelka caafimaadka si aad ugu hesho wakhti.
Waqtiga dib u qabso haddii ay caadadu kaa imaneyso, ama haddii aad leedahay uur ka weyn 15 todobaad. Adiga ayaa go'aanimaaya haddii aad rabto inaad dhiibto tijaabada unugyada, laakiin waa ay wanaagsan tahay in sidaas la sameeyo.
Ma jirto wax halis ah oo ku lug leh in tijaabada unugyada la dhiibo.
Waxa weeye dhakhtar ama umulisada cidda tijaabada unugyada qaadeysa. Waxa si gaar ah loogu tababaray inay ka shaqeeyaan hoosta haweenka. Ma jirto wax halis ah oo ku lug leh in tijaabada unugyada la dhiibo.
Waxa muhiim ah inaad fahanto waxa uu shaqaalahu sheegaayo. Waxayaad xaq u yeelan kartaa turjumaan haddii aanad ku hadlin Iswiidhishka. Turjumaanka laftiisa waxa qabanaaya xeerka sir haynta. Hore ula sii hadal rugta caafimaadka, haddii aad turjumaan rabto.
Waxaad ku fariisan doontaa kursi leh meel lugaha la saarto.
Waxaad soo galaysaa qol halkaas waxa yaala kursi loo yaqaan gynstol. Waa kursi leh meel lugaha la saarto.
Waa inaad ka jawaabto dhowr su'aalood, sida tusaale ahaan:
Miyaad leedahay uur ama miyaad dhashay carruur sanadadii ugu danbeeyey?
Miyaad isticmaashaa wax kaa ilaalinaaya uurka?
Miyey caadadii kaa go'dey/istaagtey?
Jawaabta waxa kaliya loogu tallo galay shaqaalaha.
Waa inaad dharka iska saarto qaybta hoose ee jirka. Waxaad xiran kartaa goono/haaf, toob ama funaanad dheer haddii aad rabto. Kadibna waxaad ku jiifsaneysaa kursiga gynstolen. Isku dey inaad is dejiso.
Dhakhtarka ama umulisada ayaa burush yar oo khafiif ah tijaabo kaga soo qaadaysa xagga hoose ee siilkaaga. Waxay kaliya qaadaneysaa dhowr daqiiqo. Wax xanuun ah ma keento.
Qofka la gudey
Wax dhibaato ah ma laha inaad dhiibto tijaabada unugyada xataa haddii lagu guday. Waxa laga yaabaa inaad u baahato in lagu daaweeyo ka hor intaan tijaabada unugyada, la qaadin haddii afka siilkaagu uu aad u yar yahay. La hadal rugta caafimaadka ee kuugu yeedhay tijaabada unugyada.
Waxaad ku hadli kartaa Iswiidhish ama Ingriisi. Waxba kuma kharash gareynayso inaad waxdo 1177.
Waxaad jawaab heli doontaa qiyaastii lix todobaad gudahood. Waxaad heli doontaa warqad ama waxa lagugula soo xiriiri doonaa telefoonka. Warqada waxa loo direyaa cinwaanka aad ka diiwaangashan tahay. Waxaad u imaan doontaa baadhitaan cusub haddii tijaabadau ay muujisay in wax iska beddeleen ilmogaleenkaaga.